काठमाडौंमा स्वाइन फ्लू देखियो
काठमाडौं । काठमाडौंमा स्वाइन फ्लू भेटिएको छ । कुलेश्वरकी ३८ वर्षीया महिलाको रगतमा स्वाइन फ्लूको एच् वान् एन् वान् भाइरस भेटिएको हो । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुनले रगत परिक्षण गर्दा स्वाइन फ्लूको संक्रमण....
पिसाव पोल्ने समस्या भए यसो गर्नुहोस्
पिसाव पोलेको रोकथामका लागि गरिने केही घरेलु उपायहरु यस्ता छन्ः
१. बोटैमा पाकेको अर्गानिक आप १ हप्तासम्म दिनको दुइवटा सेवन गर्नाले धेरै पिसाबका रोगहरु निको हुन्छन् ।
२. गाजरको रस साँझ बिहान १,१ गिलास सेवन गर्नाले पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
आलुको बोक्राको फाईदा
तरकारी र अचारमा प्रयोग हुने आलुका विभिन्न परिकारहरु छन् । जसलाई मानिसले धेरै रुचाउँछन् । तर आलुलाई जति रुचाइन्छ, त्यसको बोक्रालाई महत्व दिइदैन । हामी आलुको बोक्रा फालेर आलुको परिकार बनाउने गर्छौं । आलु जति लाभदायक छ त्यति नै यसको बोक्रा पनि हाम्रो स्वास्थ्य र....